Nankalazain’i Japana Tamin’ny Alalan’ireo Voninkazo Mimoza Sy Antontan’Isa Mampalahelo Ny Andro Iraisam-Pirenena Ho an’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Nankalazain'i Japana Tamin'ny Alalan'ireo Voninkazo Mimoza Sy Antontan'Isa Mampalahelo Ny Andro Iraisam-Pirenena Ho an'ny Vehivavy
Voadika ny 11 Marsa 2016 2:36 GMT
Ireo mpilalao tantara avy amin'ny tantara an-gazety iray ao Japàna. Ny mpilalao eo ankavanana misolo tena an'i Niijima Yae Yae. Pikantsary avy amin'ny mpampiasa YouTube Tsunoda Kazushi
Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ny 8 Martsa, izay ao Japana dia fantatra tsara amin'ny Andron'ny mimoza (ミモザの日, ilazàna ilay voninkazo mimoza, fa tsy ilay toaka mifangaro ranom-boasary).
Tsy andro fialantsasatra ofisialy ao Japana io andro io, nefa amin'ny media sosialy misy ireo hafatra mitory fitiavana, tambitamby sy fankasitrahana ho an'ireo vehivavy.
— coco (@1122Yamarei) March 7, 2016
Arahaba maraindraina. Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy androany – Andron'ny Mimoza.
Any Italia, io no andro hanoloran'ireo lehilahy voninkazo mimoza ho an'ireo vehivavy ho fanehoana fankasitrahana.
Noho izany, ho an'ireo vehivavy be andraikitra rehetra, te-hiteny aho hoe misaotra betsaka anareo:)
Ho an'ireo marika sasany, ny 8 Martsa dia fomba iray hafa hifandraisana amin'ny olona kendren'izy ireo. Fiat Japana, ohatra, nibitsika hoe:
毎年3月8日は、国連で「国際女性デー」と定められた記念日。イタリアでは「フェスタ デッラ ドンナ（＝女性の日）」という、女性に感謝を込めて黄色い花「ミモザ」を贈る日です。
— フィアット (@FIAT_JP) March 7, 2016
Isantaona, ny 8 Martsa ny Firenena Mikambana no mankalaza ny “Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy”. Ao Italia, io andro io dia fantatra amin'ny hoe “Festa della donna” (Andron'ny Vehivavy), ary omena voninkazo mavomavo ireo vehivavy (mimoza) mba ho mariky ny fankasitrahana.
Ahoana ny hevitrao momba ny fanolorana tsy ankiteniteny voninkazo [ho an'ireo vehivavy eo amin'ny fiainanao] androany?
Ireo mpandraharaha hafa mampiasa ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ho toy ny fotoana iray mba handraisana ho zava-dehibe kokoa ny olana manjo ireo vehivavy.
— crayonhouse (@crayonhouse) February 25, 2016
Ho fialohavana ny 8 Martsa, Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy, mampiranty boky nofantenana miresaka ny zon'ny vehivavy sy ny fitoviana ho an'ireo vehivavy izahay.
Ny governemanta japoney dia mampiroborobo “fiarahamonina iray izay handraisan'ireo vehivavy anjara mavitrika”. (女性が輝く社会, matetika hadika hoe “Hamelona an'i Japana ny Vehivavy”), raha fantatry ny governemanta ny tantaran'ireo vehivavy, nahoana no tsy misy dingana nirosoana hiatrehana ny fanavakavahana misy mihatra amin'ireo vehivavy?
Tsy fitovian-jo sy fanavakavahana ao Japana
Indrisy, raha ampitahaina amin'ny satan'ireo vehivavy any amin'ireo toekarena hafa miroborobo, tsy tsara velively ny laharana misy an'i Japana. Ny biraon'ny Fikambanana ho an'ny Fiarahamiasa Ara-toekarena sy ny Fampandrosoana – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ao Tokyo nibitsika hoe:
— OECD東京センター (@OECDTokyo) March 3, 2016
Raha resaka isan'ireo vehivavy voafidy ho amin'ny birao nasionaly, voakilasy any akaikin'ny laharana farany i Japana.
Araka ny angon-drakitry ny OECD, i Japana no farany amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny OECD raha resaka vehivavy misehatra ara-politika. Afaka hita eto ny tabilao iray tsara kalitao.
Herinandro tsy hahatongavan'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy dia namoaka fanadihadiana ny governemanta Japoney fa 30% n'ireo vehivavy miasa no voalaza fa niharan'ny herisetra ara-nofo tao Japana, tamin'ity taona ity.
30% of working women sexually harassed – The Japan News https://t.co/FmnnJrc3Lb #セクハラ pic.twitter.com/pVoT4q6323
— The Japan News (@The_Japan_News) March 3, 2016
30% n'ireo vehivavy miasa no niharan'ny herisetra ara-nofo – Vaovao n'i Japana https://t.co/FmnnJrc3Lb #セクハラ pic.twitter.com/pVoT4q6323
Na izany aza, misy fitomboan'ny fahatongavantsaina ara-piarahamonina momba ny olan'ny herisetra ara-nofo (セクハラ, sekuhara), na dia indraindray aza ireo marika lehibe hijanona ho tsy te-hahalala.
Nisy dokambarotra fanentanana iray vao haingana ho an'ny Pizza Hut nanasongadina an'i Nishino Nanase “ilay mahafatifaty” nokianina noho ny fotokeviny manao ny vehivavy ho fitaovana:
— NaRyo#なぁちゃん推し (@nogizakanachn) March 5, 2016
[Maribolana ara-barotra] “Noho izany, aiza ny faritra mampitsiriritra eo aminao?”
Moa ve tsy ho herisetra ara-nofo io?
Ireo fanamby hafa atrehan'ireo vehivavy ao Japana dia ahitàna ny fitomboan'ny tsy fitovian'ny karama raisina : zaza iray amin'ny enina no miaina anaty fahantrana, ary ny ankamaroan'ireo zaza ireo dia miaina anaty ankohonana tsy misy afa-tsy mny iray amin'ny ray amandreny, entim-behivavy.
Ary ho an'ny ankamaroan'ireo vehivavy, ny “Womenomics” n'ny governemanta Abe amin'izao fotoana izao dia midika fotsiny ho fangatahana mba hanaovana asa maro kokoa ho takalon'ny fotoana malalaka.
Ankasitraho izay tokony ankasitrahana
Manana fombandrazana efa elabe momba ireo vehivavy mpiasa mpibata entana ary “vehivavy mpiady” i Japana, hatramin'ny taloha ka mandraka ankehitriny. Raha misy toerana maro hahafahan'ny firenena hanatsara ny zon'ireo vehivavy, dia misy tara-pahazavàna vitsivitsy koa tato anatin'ny taona faramparany izay nahazoan'ireo vehivavy malaza ny haja mendrika azy ireo.
Ny bilaogin'ny kolontsaina japoney Tofugu dia nanokana andian-tantara manontolo ho an'ireo Vehivavy Badasses ao Japan.
Ary ny taona 2013, nitana ny toerana voalohany tain'ny filalaovana tantara mampitahotra tao amin'ny fahitalavi-panjakàna japoney NHK ireo vehivavy mpiady. Ilay andian-tantara maharitra aman-taonany, Yae no Sakura (八重の桜), nitantara ireo trangan'ny Ady Boshin nandritra ny antsasaky ny taonjato faha-19 sy nampahafantatra ny fiainan'ireo vehivavy roa izay niady tao anatin'izany, Niijima Yae sy Nakano Takeko. Avy ao Aizu izy roa ireo, tao Fukushima ankehitriny.
Raha noraisina ho toy ny olo-malaza amin'izao andro maoderina izao i Nakano, izay maty an'ady, tsy izany no zava-nisy hatramin'ny taona 2013 izay nidiran'i Niijima Yae tao an-tsain'ny rehetra.
— たまみの塊肉 (@tmaaaaa3) November 20, 2015
Rehefa miresaka ireo vehivavy ao Aizu isika dia Nakano Takeko foana izay, saingy taorian'ny nijerena ilay tantara mahatahotra naharitra an-taonany dia i Niijim Yae izao no resahana.
[Fanamarihana: Ny saribe nopihana tao Aizu, Fukushima, dia mampiseho an'i Ayase Haruka, ilay mpilalao izay nisolo tena an'i Niijima Yae tao anatin'ireo andian-tantara.]
Roa taona latsaka taorian'ny loza nihatra tamin'i Tohoku ny taona 2011 no nanombohan'ireo andiany ireo, izay naharava an'i Fukushima sy ireo faritra hafa tany avaratra atsinanan'i Japana.
Ho an'ny maro, nanamarika ny toetsain'i Fukushima sy ny faniriana hanorina indray taorian'ny horohorontany, tsunami ary loza nokeary, ny herimpo, ny faharisihana ary ny fahavononanan'ireo vehivavy.
こないだの #あさが来た 録画で観たけれど、巴御膳や鬼を出したのだから、もうひと押し八重さんも出してくれたら#八重の桜 pic.twitter.com/Tj3VkclmGm
— てんぷる (@temple_ak12) January 31, 2016
Maribolan'ny saribe: tsy ho kivy mihintsy i Aizu [Fukushima]
Vao haingana aho no nijery Yae no Sakura.
3 andro izayIndonezia
1 herinandro izayThailandy
02 Janoary 2020Amerika Latina
Brezila: “Tsunami” tao amin'ireo tanàna mahantra indrindra any Avaratra-Atsinanana